Kunyukile ukuthengwa kwezimoto ngo-2021
IToyota Hilux idayise kakhulu ngo-2021
PHEZU kokuba iCovid-19 iqhubekile nokuphazamisa ukusebenza kwezimboni ezahlukene ngo-2021 kodwa izibalo zokudayiswa kwezimoto ezintsha, zikhombise ukunyuka.
Ngokwezibalo ezikhishwe yiNational Association of Automobile Manufacturers of South Africa (Naamsa), isibalo sezimoto ezidayise ngonyaka odlule sibe ngu-464 122 nokuwukunyuka ngo-22.1% uma kuqhathaniswa no-2020.
Unyaka u-2020 waba mubi embonini njengoba isibalo sezimoto ezadayisa sehla ngo-29.2% saba ngu-380 206 sisuka ku-536 612.
“Imboni yenze kahle njengoba ibibhekene nezingqinamba eziningi unyaka wonke. Kusuka ekuphazamisekeni kokutholakala kwamaphathi emhlabeni wonke, ukushoda kwezinhlobo zezimoto, ukunqanyulwa kukagesi okuhleliwe, ukwenyuka kwezindleko zokuthutha nokunye.”
INaamsa ithe ukuhlaselwa kweTransnet, imibhikisho, ukuqiniswa kwemithetho yomvalelandlini, ukwenyuka kwentengo kaphethroli nenzalo yemali mboleko ngohhafu wesibili wonyaka, akuphazamisanga kakhulu.
Izinkampani eziqashisa ngezimoto zidlale indima enkulu, ekuthengweni kwezimoto ezincane. Isibalo sezimoto ezakhiwa kuleli ezidayiswe kwamanye amazwe sibe wu-295 268. Sinyuke ngo-23 980 noma u-8.8% uma kuqhathaniswa no-271 288 owaphuma ngo-2020.
INaamsa idalule ukuthi izibhelu zangoJulayi odlue, ezenzeka eGauteng naKwaZulu-Natal, nokuhlaselwa kweTransnet, nokushoda kwamasemi-conductor kuphazamise ukukhiqizwa kwezimoto.
Yathi kulo nyaka kubukeka kuzoba ngcono ngenxa yokushintsha kwesimo phesheya kanjalo nokwethulwa kwezimoto ezintsha. Phakathi kwezimoto ezintsha ezakhiwa kuleli yiMercedes-Benz C-Class esanda kuqala ukudayisa nakuleli, iFord Ranger entsha neVW Amarok entsha.
INaamsa ithe ukushoda kwamasemi-condutor emhlabeni nokunyuka kwezindleko zokukhiqiza, kuzophazamisa ukudayisa. Ithe ukucishwa kukagesi okuhleliwe kuyakhathaza, nokunyuka kwentengo kaphethroli nenzalo yemali mboleko kungase kwenze kuba nzima ukuthi abantu bathenge izimoto.
Iqagula ukuthi imboni izothuthuka kancane, isibalo sinyuke ngo-8% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule bese kuthi isibalo sezimoto ezidayiswa ngaphandle, sinyuke ngo-15%.
IToyota ivale unyaka njengenkampani edayise kakhulu, idla u-25.4%. Idayise izimoto ezingu-117 659 nokusho ukuthi eyodwa ezimotweni ezine ezidayisile, kube ngeyakule nkampani.
IHilux yiyona moto edayise kakhulu okuzedlula zonke kuleli futhi iningi lawo bekungamadouble cab. Kudayise angu- 36 085. Kuthengwe amatekisi, ohlobo lweHiace awu-15 699, kwathi amaStarlet adayisile abawu-12 103.